၁။ ဆရာရှင့် အသက်က၂၃ပါ။ OG ကရေမွာနည်းနေတယ်ပြောတယ်။ ကိုယ်ဝန်၃၄ပတ်ကျော်ရုံလေးပါ။ ကလေးကလည်း ထွားတယ်ပြောပါတယ်။ ရေမွာရေက 7.16 ပဲရှိတာ၊ ရေမွာအမှန်တကယ်နည်းနေတာလား ပြောပြပေးပါ။ ကလေးကလည်း နှလုံးခုန်မြန်နေတယ်တဲ့။ ရေမွာရေပြန်တက်လာအောင်ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်ပါလဲ ဖြေကြားပေးပါရှင့်။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်တော့်ဇနီးအသက် ၂၅နှစ်။ တတိယကိုယ်ဝန် ၃၄ပတ်ရှိနေပါပြီ။ အဲတာ အာထရာဆောင်းရိုက်တော့ ရေမွှာနည်းတယ်လို့အဖြေရပါတယ်။ ရေမွှာက အနည်းဆုံး ၈ ခုရှိရမှာ ၅ခုပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကလေးအနေအထားမှန်။ ပုံမှန်လှုပ်ရှားပါတယ်။ ရိုးရိုးမွေးလို့ရမလား ခွဲရမှာလား။ ရေမွှာနည်းခြင်းရဲ့အကျိုးအပြစ်များသိချင်ပါတယ်။
၃။ မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်မအသက် ၂၄ နှစ်၊ ကိုယ်ဝန် ၃၈ ပတ်ပါရှင်။ ကျွန်မ မနေ့က Ultrasound သွားရိုက်တော့ ရေမွှာရည်နည်းနေတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာ။ ပုံနှင့်တကွ ပို့ပေးထားပါတယ်ရှင်။ ဒီညနေ ( ၁၅. ၅. ၁၆) မှာ OG ရက်ချိန်းပြန်ပြတော့ OG က ကလေးခေါင်းလန်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်ဆရာ။ ရေမွှာနည်းနေတာနဲ့ ကလေး ခေါင်းလန်နေတာ စိုးရိမ်ရလားရှင်။ ကျွန်မက ရိုးရိုးမွေးချင်သူမို့ပါ။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ ညွှန်ကြားပြသပေးပါရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
၄။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက်က ၃၂ ပါ။ သားဦးကိုယ်ဝန်ပါ။ ကိုယ်ဝန်က ၃၅ ပတ်ပါဆရာ။ ဒီနေ့ဆေးခန်းပြတော့ ဆရာမက ဗိုက်ကတင်းပြီးကြပ်နေတယ်တဲ့။ ရေမွာလည်း နည်းနေတယ်။ အာထွာဆောင်းရိုက်ပြီး အခြေအနေကြည့်ရမယ်တဲ့။ ရေမွာကဘာကြောင့်နည်းတာပါလဲဆရာ။ စိုးရိမ်ရပါသလား။ ပြီးတော့ကလေးကလည်း အပေါ်မှာ အောက်ကို မဆင်းသေးဘူးတဲ့ဆရာ။